Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika : Raikitra ny ady an-tranon’ny IRD
Pôlitika : Raikitra ny ady an-tranon’ny IRD
Miady an-rano ny IRD izay fikambanana manohana ny fitondran’ingahy Andry Nirina Rajoelina ankehitriny. Vita tamin’ny fifidianana ny firaisan-tsaina amin’ny fanohanana ny filoham-pirenena Rajoelina. Tonga amin’ny ady seza sy tombotsoa ny fivoaran’ny raharaha ankehitriny.
Efa niaraha-nahita fa ady be ny fiadiana izay ho kandidà depiote nataon’ny mpiara-manohana iny ka nahatonga ny fizarazarana tamin’ny mpikambana IRD izao. Be no tsy faly tamin’izany ka nihataka moramora ary nanao ny azy manokana.
Nahatsiro tena ho voailikilika ireo mpikatroka tranainy maro fa olom-baovao fa indrindra ireo TGV/Mapar izay nanorina ny antoko.
Niafarany dia nilatsaka tamin’ny tsy miankina ny ankamaroan’ny mpikatroka mpanohana. Dia io iaraha-mahita io ny zava-misy fa marobe ny kandidà tsy miankina no lany.
Miditra amin’ny dingana fahatelo amin’ny ady an-trano isika ankehitriny satria samy milaza azy ho lohany avokoa ireo fikambanana miaraka ao amin’ny IRD. Tsy inona izany fa fiadiana ny ho filohan’ny Antenimierampirenena sy ny birao maharitra ao amin’ity andrim-panjakana ity.
Efa samy mandeha amin’ny ankolafiny avokoa ny IRD ankehitriny ka ny Mapar mandeha andaniny, ny iFI (Isika fikambanana miaraka amin-dRajoelina) mandeha andaniny, ny MMM izay miaraka amin’i Hajo Andrianainarivelo tsy azo tsiniavina fa ankolafy iray manana ny heriny koa, ary ny ekipan’ingahy Norbert Lala Ratsirahonana tsy mety hoambaniana ary sahy milaza fa tompony koa. Hatramin’ireo antoko mpisolelaka izay mpomba an’i Hery Rajaonarimampianina aza dia milaza fa samy dadany avokoa ka misehoseho ho lohany ao amin’ny IRD ao. Hadinony ny fanenjehana ny Mapar izay lasa nizara telo ka nisy Mapar voalohany sy faharoa ary fahatelo.
Tsy resaka antoko na fikambanana ihany no arangaranga ankehitriny fa tafiditra hatramin’ny resaka fihaviana ity raharaha ity. Re matetika amin’ity raharaha ity ankehitriny ny filazana fa avelao mba ho anay avy any amin’ny faritra Toliara ny filohan’ity andrim-panjakana ity satria tsy mbola nisy izany hatramin’izay. Dia milaza ny avy any Toamasina fa toa izany koa ny avy any Toamasina. Hatramin’ny resaka lahy sy vavy aza dia mibahana toerana ankehitriny ka isan’ny miady mafy sy misy mpanosika be amin’izany i Irma Naharimamy sy Christine Razanamahasoa. Rariny sy hitsiny izany satria mbola tsy nisy vehivavy nitondra ity andrim-panjakana ity hatramin’izay. Ny mahakasika azy roa vavy ireto dia asa izay hataon’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria ny iray mbola tanora mitovy aminy ary tsara tarehy ary ny iray kosa efa zokinjokiny sy manana traikefa ary manam-pahaizana.
Ny mpomba ireo kandidà ireo no miady ankehitriny ka mifamory etsy sy eroa manao izay fomba hanilihana ny tsy namana.
Raha tena hitondra fanjakana marina nefa ny antoko na ny firehana iray dia tsy tokony hisy izao adilahy pôlitika hita ao amin’ny IRD izao. Marina fa fomban-javatra ihany izany hoy ny mpomba fitondrana saingy tsy faneho masoandro hoy ny mpitazana avy ety ivelany.
Be loatra ankehitriny ny ady anatiny ato amin’ity IRD ity sy ny mpomba an’ingahy Andry Rajoelina ka raha tsy mitandrina ity filoha ity dia mety hitarika korontana anatiny ao amin’ny fanjakana izany.
Ankoatr’ity raharaha ity dia niaraha-mahita fa mbola resaka hafa ny mahakasika ny disadisa mahakasika ny “diaspora” sy ny Malagasy mpomba TGV/Mapar eto Madagasikara. Tena miady sy mifanaratsy na dia mifampihatsara ivelan-tsihy fotsiny aza. Tonga hatrany amin’ny fiavonavonan’izy samy mpanohana nyfanjakana ny raharaha.
Hivory androany asabotsy faha 13 jolay 2019 ny IRD sy ny fikambanana hafa mpomba azy etsy amin’ny ARENA etsy Ankorondrano ka ho hitantsika eo ny vokatr’izany. Voalaza fa ingahy Andry Nirina Rajoelina mihitsy no hitarika izany.